स्कटल्याण्ड चर्चित सबैभन्दा सुन्दर केही छ परिदृश्य र संसारमा मार्ग दृश्य तालिम. यो रेलवे यात्रा रिमोट Moors को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ, lochs, र पहाड. पश्चिम हाइल्यान्ड रेखा मा यात्रा, तपाईं पर्याप्त भाग्यमानी हुनेछु अनुभव दिग्गज Glenfiddich Viaduct. परिचित हेर? किनभने यसले मा Hogwarts एक्सप्रेस रूपमा चित्रित थियो छ Harry Potter चलचित्र मताधिकार. ती दृश्यहरू प्राप्त हुनेछ डबल-ट्यापहरू कल्पना गर्नुहोस्.
तपाईं एक ढिलो गति रेल मार्ग दृश्य रुचि भने, यो तपाईं र तपाईंको इन्स्टाग्राम अनुयायीहरूलाई लागि मार्ग छ. तपाईंको अचम्मलाग्दा मनोरम दृश्यले famed Matterhorn एक दृश्य सुरु हुनेछ. जर्मेट देखि, तपाईं साथ आफ्नो सात घण्टे रेलवे यात्रा छौँ यूनेस्को सेन्ट Moritz गर्न विश्व सम्पदा साइट मार्ग. महिमाको रूपमा फोटो तडक आनन्द अल्पाइन भिस्टा दृश्यहरूले तपाईंको विन्डो पार गर्दछ.
रेल मार्ग दृश्यका लागि हाम्रो बन्द विकल्प – Inlandsbanan, स्वीडेन
त्यसोभए अब जब तपाईले रेल मार्ग दृश्यको बारेमा जान्नु भयो र जीवन परिवर्तन गर्ने रेल सवारीमा जान तयार हुनुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो इंस्टाग्राम खातामा पोलिश गर्नुहुन्छ र केहि नयाँ अनुयायीहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।? आज आफ्नो सपना रेल यात्रा बुक एक ट्रेन सेव. र तपाईं हाम्रो इन्स्टाग्राम खाता पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ instagram.com/saveatrain
#स्कटल्याण्ड	इन्स्टाग्राम	स्वीडेन	रेल यात्रा	यात्रा	travelnorway	यातायात स्विट्जरल्याण्ड